Akhriso: Wax Walba Oo Ku Saabsan Cudurka Dabeysha – Goobjoog News
Cudurka dabeysha waa cudur uu sababo Virus, waxa uuna keeni karaa qofka inuu noqdo naafo, waxa uuna ku badan yahay da’da caruurta sidoo kale cudurkani ayaa ah cudurada la kala qaado.
Waxaa jira mararka qaar calaamado yar oo lagu garto sida cunto cunista qofka oo yaraato iyo lalabo, kuwaas oo ah calaamadaha ugu yar oo lagu garan karo cudurkani dabeysha.
Cudurkani waxaa sababa Virus loo yaqaanno Polio Virus, kaasi oo ah mid la kala qaado waxaana lagu kala qaadaa in Virus-ka uu qofku laqo, waxa uuna ku laqi karaa habab badan sida, qof ayaa saxaroonaya isaga oo si fiican aan is kaga dhaqin gacantii ayuu afka gashan karaa sidaas ayuuna ku yimaaddaa cudurkani.
Cudurkani maxay ayuu xiriir la leeyahay?
Waxa uu xiriir la leeyahay nadaafad-darrida oo ay ka mid tahay saxarada oo aan aad la is kaga fogeynin sida in aan musqulaha aan lagu saxaroonin oo banaanka lagu saxaroodo iyo in gacmaha aan lagu dhaqin saabuun saxarada ka dib wax yaabahaas oo idil waxa ay ka mid yihiin siyaabaha keenaya in cudurkani la isku gudbiyo.
Waxaa jirta labo qodob oo asaasi ah oo looga hortagi karo cudurkani kuwaas oo kala ah talaalka iyo nadaafadda oo aad loogu dadaalo waxa ayna yareyn karaan halisaha uu leeyahay cudurkani.
Cudurkani bulshada qeybahee ayuu ku badan yahay?
Cudurkani waxaa uu ku badanyahay caruurta shanta sano ka yar sababtoo ah difaaca jirkooda ayaa aad u yar waxaana aad ugu nugul ilmaha yar.